Waa Kumaa Seynisyahanka Niyukleer IRAN Ee La Khaarajiyay? – somalilandtoday.com
Waa Kumaa Seynisyahanka Niyukleer IRAN Ee La Khaarajiyay?
(SLT-Iran)-Mohsen Fakhrizadeh, waa seynisyahanka ugu caansan ee barnaamijka Niyukleerka Iiraan, islamarkana waxaa uu ka mid yahay shaqsiyaadka ugu sareeya ee ilaalada kacaanka Iiraan.
Sida ku cad dhukumiinti sir ah oo ay heshay Israa’iil 2018, waxaa uu Fakhrizadeh hogaaminayay barnaamij lagu dhisayo hub Niyukleer ah.
Sannaddii 2015, wargeyska New York Times ayaa la barbar dhigay J Robert Oppenheimer, oo ahaa seynisyahankii hagayay soo saaridda hubkii Atoomikada ee ugu horreeyay ee Mareykanka dagaalkii labaad ee aduunka.
Dhanka kale xiisadda u dhaxeysa Mareykanka iyo Iraan ayaa cirka isku shareertay bishii January ka dib markii ay Mareykanka dileen Janaraal Qasem Soleimani, oo ahaa abaanduulihii xoogagga Quds.